Soo iibso budada Desogestrel (54024-22-5) hplc = 98% | AASraw
Dufanka Desogestrel (54024-22-5)
/ Products / Gowrado Dumar ah / Dufanka Desogestrel (54024-22-5)
SKU: 54024-22-5. Category: Gowrado Dumar ah
AASraw waxaa la socda awoodda wax soo saarka iyo wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud ee budada Desogestrel (54024-22-5), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Duufaanta Desogestrel waxaa laga helay 1972, waxaana loo soo bandhigay isticmaalka daaweynta Yurub ee 1981.It waxaa laga helaa Maraykanka ee 1992.Desogestrel waxaa mararka qaar loo yaqaan "progestin" saddexda jiil "Pretestin. taas oo si ballaaran loo heli karo sida "pill mini" oo ah progestogen-kaliya "kiniinka mini" ee loogu talagalay kantaroolka dhalashada. Desogestrel waa suuq-gaas oo ku baahsan adduunka oo idil. Waxaa laga helaa daawo guud.
Filimada dufanka Desogestrel
Duufaanta Desogestrel Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Duufaanta Desogestrel
Formula kelli: C22H30O
Miisaankani waa: 310.47
Dhibcaha Biyaha: 109-110 ° C
Kaydinta Nabadgelyada: -20 ° C Talaajo
Wareegga budada ee Desogestrel
Magacyada kiimikada: Dufanka Desogestel
Noocyada Magacyada: Cerazette, Mircette, Budada Desogestrel, Budada Cerazette, Mircette Mircette, 54024-22-5
Isticmaalka budada Desogestrel
Dufanka Desogestrel (Cerazette) waa kiniin ka hortag uuraysi ah, oo sidoo kale loo yaqaan 'pill mini'. Cerazette waxay si degdeg ah uga hortageysaa uurka, marka la qaato maalinta koowaad ee mudadaada. Waxay ka duwan tahay kiniinka ka hortagga uur-qaadista ee caadiga ah sababta oo ah wuxuu leeyahay hal qayb oo firfircoon oo kaliya, progestogen-nal ah.
Sida p-pillerka ugu hooseeya, Cerazette waa hab wax ku ool ah oo ilaalin ah, waxaana uu cadeeyay inuu ka badan yahay 99% oo ku oogan tijaabooyinka kiliiniga . Waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in ay caawimaad ka gaabinayso dhimista dhacdooyinka aan fiicneyn iyo waqtiyada xanuun leh. Qaadashada uur-qaadidda afka ah waxay ku siinaysaa dabacsanaan, maadaama ay ka duwan tahay inta ugu badan ee progestogen-ka ee ka-hortagga uur-qaadista, waxaad qaadan kartaa kiniinkaaga ilaa saacadaha 12 ka dambeeya wakhtigaaga caadiga ah
Budada Desogestrel (CAS 54024-22-5) waxay la timaadaa dhowr faa'iidooyin, marka lagu guuleysto. Kuwaas waxaa ka mid ah:
-Kani kaniiniga dhalmada ee dhalmada ayaa ku siinaya ka hortag degdeg ah haddii aad qaadato maalinta koowaad ee mudadaada
-Haddii ay ku jirto kaliya progestogen, waa ku haboon tahay inaad isticmaasho haddii aadan awoodin, ama aad doorbidid inaadan isticmaalin, ka-hortagga uur-qaadidda afka ah ee estrogen
- Maqnaanshaha estrogen ee kiniinkan xakameynta dhalmada ee dhalmada ayaa badbaado u leh isticmaalka markaad naas nuujinayso
-Waxaa isticmaala qalabka loo yaqaan "Degestrel" (Cerazette) ee loogu talagalay ujeedooyinka ka hortagga uur-qaadida sidoo kale waxay ogaan karaan in muddooyinkooda ay ka yaryihiin xanuun aan caadi ahayn
-Degesogestrel (Cerazette) ayaa laga qaadi karaa haweenka naas nuujinaya, iyo kuwa ka weyn 35 iyo sigaar cabista, taas oo ah xaddidaad ka-hortagga uur-qaadidda afka ah
-In tijaabooyinka kiliiniga 94% ee haweenka qaba xanuunka dysmenorrhea (muddooyinka aadka u daran) waxay soo mareen horumar weyn
Waa maxay qiyaasta budada Desogestrel
MACLUUMAAD MACLUUMAAD AH LOO BIXIN DOORASHADA HOGAABKA MACLUUMAADKA KALIYA IYO WAXA LOO ISTICMAALO SIDA LOO ISTICMAALO SIYAABAHA LOO HORUMARIN AMA QIIMEYNTA CAAFIMAAD EE KALE
Dufanka Desogestrel (budada Cerazette) ayaa qiyaasta dhakhtarkaaga kugula talin doona inuu ku saleysnaado kuwan soo socda (isticmaal ama wax kasta oo khuseeya):
Xaaladda la daweynayo
xaaladaha kale ee caafimaad ee aad qabtid
daawooyinka kale ee aad qaadato
sida aad uga jawaabeyso dawadan
Dufanka Desogestrel wuxuu ku jiraa qiyaasaha soo socda:
Desogestrel budada-etinyl Estradiol 0.15 Mg-0.03 Mg Tabeel Afka
Desogestrel budada-etinyl Estradiol Lip Tablet Tablet
Desogestrel budow-ethinyl Estradiol Tablet Afka Afafka ah
Nooc kasta ee budada Desogestrel (Cerazette) waxaa ku jira kiniinada 28 - 4 usbuucyada la bixiyo.
Qaado kaniiniga maalin kasta isku wakhti isku mid ah. Kiniiniga oo dhan ha liqin, biyo.
Fadhiyada waxaa lagu daabacaa dhinaca hore ee fiilada, inta u dhaxeysa kiniiniyada. Maalmaha wiiggu waa la daabacaa dhabarka danbe. Maalin kasta waxay u dhigantaa hal kiniin.
Markasta oo aad bilowdo dhar cusub oo budada Desogestrel ah (Cerazette), ka qaad kiniin ka safka sare. Ha ku bilaabin kiniinnada oo kaliya. Tusaale ahaan haddii aad bilowdo Arbaco, waa inaad kiniinka ka qaadataa safka ugu sareeya ee lagu calaamadeeyay (gadaasha) oo leh WED.
Sii wad inaad qaadatid hal kiniin ah maalin kasta ilaa khariidadu ay madhan yihiin, had iyo jeer raac tilmaamaha lagu muujiyay fallaarada. Adigoo eegaya gadaasha xirmadaada waxaad si sahlan u hubin kartaa haddii aad hore u qaadatay kaniiniga maalin gaar ah.
Waxaa laga yaabaa inaad yeelatid dhiigbax hoosta ah inta lagu jiro isticmaalka budada Desogestrel (Cerazette), (Eeg Qaybta 4 Sideediisa), laakiin waa inaad sii wadaa qaadashada kaniiniyada sida caadiga ah.
Marka qalabku uu madhan yahay, waa inaad ku bilowdid qashin cusub oo budada Desogestrel ah (Cerazette) maalinta xigta - iyada oo aan la joojin iyo adoon sugin dhiig.
Sida ay u shaqeeyaan budada Desogestrel
Waxay ku xidhan tahay dukaamada progesterone iyo estrogen. Unugyada bartilmaameedka ah waxaa ka mid ah habka dheddig-jinsiga ee haweenka, qanjidhada naasaha, hypothalamus, iyo pituitary. Marka la xakameynayo baraha, progestins sida budada Desogestrel waxay yareyneysaa inta jeer ee sii deyneysa gonadotropin sii daaya hormoonka (GnRH) ee hypothalamus iyo cirridka horey u-fuuq baxa (Luteining hormone).
Budorka Desogestrel wuxuu u shaqeeyaa sida uur-qaadista ugu horeyn isagoo ka hortagaya sii-deynta ugxanta ugxan (ugxansidaha). Waxa kale oo ay qaadataa in ay sii kordhiso dhumucda qoyaanka dabiiciga ah ee qoorta ilmagaleenka, taas oo ka dhigeysa mid adag in shahwadu ka soo baxdo siilka. Marka laga hortago shahwada galaya ilmo galeenka, bacriminta guuleysta ee ukumo kasta oo la sii daayo way yar tahay.
Dufanka Desogestrel (Myrkette Pyridr) ayaa sidoo kale wax ka beddelaya tayada xuubka ilmagaleenka (endometrium). Tani waxay ka hortagtaa in wareegga guusha ee ukunta bacriminta lagu dhejiyo derbiga ilma-galeenka, sidaas awgeedna looga hortago uur.
U sheeg dhakhtarkaaga haddii aad uur leedahay ama qorsheyso inaad uur yeelatid.
FDA waxay uqaybqaadataa daawooyinka ku saleysan amniga isticmaalka xilliga uurka. Shan qeybood - A, B, C, D, iyo X, ayaa loo isticmaalaa in lagu qeexo khatarta suurtagalka ah ee ilmaha aan dhalan marka daawada la qaato xilliga uurka.
Budada Desogestrel waxay ku dhacdaa qaybta X:
Waxaa la muujiyey in haweenka qaata budada Desogestrel inta lagu guda jiro uurka waxay yeelan karaan ilmaha dhibaatooyin qaba. Ma jiraan xaalado ay faa'iido u leedahay daaweynta hooyada oo aad uga culus halista waxyeellada ilmaha. Daawooyinkaan waa in aan marna loo isticmaalin haweenka uurka leh.
Doolow Desogestrel (CAS 54024-22-5)
Desogestrel Powder Market
Miyuu doofaarka Desogestrel leeyahay Wax Saameyn Kale
Dufanka Desogestrel (Cerazette) waa daaweyn ka hortag uur-daaweyn ah, taas oo macnaheedu yahay in ay jirto halis yar oo ku timaadda saameynaha. Tijaabooyinka kiliiniga, Cerazette ayaa si aad ah u dulqaadanayey ka qaybgalayaasha, iyo qaar ka mid ah saameynaha yar yar sida:
Isbeddelada niyadda, hoos u dhaca jinsiga (libido), madax xanuun, lallabo, finan, xanuun naaso, caadooyin aan caadi ahayn iyo miisaan kordha
Cilmi-baaristu waxay muujineysaa in kuwaani ay ka yaryihiin mid ka mid ah 10kii haween ah. Dhibaatooyinkani waa ineey noqotaa mid soo jiidan karta maadama ay jirku ku bilaabmeen kiniiniyada mini-kiniiniga ah, laakiin haddii ay dhacaan inay dhacaan oo ay sii socoto, waa inaad la xiriirtaa takhtarka si aad ugala hadasho xaaladaada.
Sida loo soo iibsado budada Desogestrel laga bilaabo AASraw
Desogestrel Powder For Sale: Faahfaahinta & Qiyaasta & Saameynta
Migepristone budada (84371-65-3)
Estradiol Benzoate budada
Estradiol Daawada budada ah